Sora-miafina amin'ny fanidy abaribary - Wikipedia
Sora-miafina amin'ny fanidy abaribary
Ny sora-miafina amin'ny fanidy abaribary (anglisy: public key cryptography, frantsay: cryptographie à clef publique) dia fomba fanafenan-kafatra fampiasa amin'ny kajimirindra, indrindra amin'ny tranonkala izay mety mampiasa fifandraisana atao sora-miafina toa ireo tranonkala fivarotan'entana ary mandray vola amin'ny alalan'ny fangalàna ireo laharan-kara-pandoavan'ny mpanjifany amin'ny Aterineto.
Amin'ny sora-miafina amin'ny fanidy abaribary dia samy manana fanidy roa ny mpampiasa:
Ny atao hoe fanidy abaribary dia fanidy zarazaraina amin'ny mpikambana ifanakalozana hafatra, ary ny fanidy afenina dia tazonina ho an'ny tena. Hidiana amin'ny alalan'ny fanidy abaribarin'ny mpandefa ny hafatra tonga, anefa kosa ny fanidy afenina izay nanaovana ilay fanidy abaribary no afaka manalahidy ary mamaky an'ilay hafatra. Misy fifandraisana matematika ny fanidy abaribary sy ny fanidy afenina, fa sarotra atao ny mikajy an'ilay fanidy afenina avy amin'ny fanidy abaribary.
Ny sampanana roan'ny sora-miafina amin'ny fanidy abaribary dia:
Fanidiana amin'ny fanidy abaribary (anglisy: public key encryption): ny hafatra dia hidiana (afenina) amin'ny alalan'ny fanidy abaribarin'ny mpandray hafatra, ary tsy afaka vakiana raha tsy sokafana amin'ny fanidy afenina.
Sonia arak'isa (anglisy: digital signature): ny hafatra nosoniavina tamin'ny fanidy afenin'ny mpandefa dia azo marinin'ny mpahazo hafatra manana ny fanidy abaribarin'ilay mpandefa, ka raha nosoniavin'ilay mpandefa ilay hafatra dia tsy afaka ovain'iza na iza. Ampiasaina amin'ny famantarana (anglisy : authentication) izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sora-miafina_amin%27ny_fanidy_abaribary&oldid=773626"
Voaova farany tamin'ny 12 Novambra 2015 amin'ny 16:08 ity pejy ity.